Changdeokkung, Changdeokgung Palace - Seoul
Asia Korea Atsimo Seoul
Adiresy: 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seou
Tel: +82 2-762-8261
Tsidiho ny fotoana: isan'andro, afa-tsy ny alatsinainy, nanomboka tamin'ny 9:00 hatramin'ny 17:00
Changdeokgung - io no hany lapa rehetra voatahiry any Korea Atsimo , izay niaro tanteraka ny endriny nanomboka tamin'ny fananganana voalohany tamin'ny taona 1412. Ankehitriny dia voarakitra an-tranonkala eran-tany izy io ary iray amin'ireo sariaka malaza indrindra any Seoul .
History of Palace Changdeokgung in Seoul
Ny fiandohan'ny fanorenana ilay lapam-panjakana dia nomena tamin'ny taona 1405. Vita tanteraka tao anatin'ny 7 taona. Tamin'izany fotoana izany dia ny lapan'ny Gyeongbokgung no lehibe indrindra tamin'ny fitondran'ireo Koreana, ary i Changdeokgung dia natsangana ho trano fonenana fahavaratra. Tamin'ny endriny tany am-piandohana, nipetrahan'ny lapa roa hatramin'ny faran'ny taonjato faha-16, mandra-panaisan'i Japon an'i Seoul. Nandritra ny dingan'ny fanafihan'ny tafika dia ny sisa tavela ihany no nijanona avy tao Changdeokgung sy Gyeongbokgung.
Tsy maintsy niaina tany Toksugun ny Mpanjaka Sonjo raha vao tafaverina tany amin'ny faritra misy azy , izay tsy dia nahagaga loatra nandritra ny fanafihan'ny Japoney. Indrisy anefa fa ny lakolon'ny mpanjaka dia nanjary kely loatra io lapa tsara tarehy io, ary nanapa-kevitra ny hamelona an'i Changdeokgung. Ny tranokalan-trano lehibe ho an'ny solontena rehetra avy amin'ny lapan'ny mpanjaka tantanin'ny mpanjaka dia avy any amin'ny tapaky ny taonjato XVII sy hatramin'ny 1926, rehefa maty ny mpanjaka farany tany Sunjon.
Park of Changdeokgung Palace
Ny toerana malaza ho an'ny mpizaha tany dia tsy ny lapa mihitsy akory no misy ny efitrano tsara tarehy, fa ny kianja miafina izay manomboka ny lapa. Ny ankamaroany dia antsoina hoe "zorony", na Pivon.
Raha vao ny zaridaina no teboka fanombohana ny fananganana trano lehibe eto amin'ity toerana ity. Ny làlan-dàlan-dalany sy ny gazebosiny dia nanjary toerana tena tsara ho an'ny zaridainan'ny mpanjaka. Ao amin'io zaridaina io dia tsy neken'ny mpiasam-panjakana, noho izany ny mpanjaka dia mety ho irery na amin'ny vahiny.
Ny maha-tokana ny zaridaina miafina dia tsy manimba ny faritra manodidina ny tendrombohitra. Tsy nisy olona nanandrana nanamboatra ny faritany ary namboly hazo sy kirihitra tamin'ny fomba sasany. Ny famoronana zaridaina, ireo architects koreana dia niezaka ny hitazona sy hitazona ny hatsarana manokana amin'ity toerana ity, miaraka amin'ny alany sy renirano, rakotra ranomandry ary be loatra ny havoana.
Ny Tempolin'i Chonme dia napetraka tamin'ny taonjato faha-15, niaraka tamin'ny fanorenana ny lapa. Nanomboka teo, dia ahitana ny harenan'ny Jazonin'i Joseon, izay voatandrina tsara. Angamba io ny tahirim-bola izay nahatonga ny famindrana ny trano fonenana ho any Changdeokgung. Misy takelaka misy ny anaran'ireo mpanjaka, mpanjakavavy, andriana ary solontena hafa avy amin'ny tarana-mpanjaka, ary ao amin'ny efitrano manaraka - takelaka misy ny anaran'ireo namana 82 izay nanampy ny mpanjaka koreana nandritra ny fotoana nanjakany.
Toerana akaikin'ny Changdeokgung Palace
Ho an'ny fandraisam-bahiny ao Seoul, afaka mifidy ny faritry ny lapa mpanjaka ianao. Amin'ity tranga ity, hiaina eo akaikin'ny zaridaina tsara tarehy iray izay ahafahanao mandeha isan'andro, ary tsy lavitra ny toerana rehetra any an-drenivohitra. Ho an'ny trano fialan-tsasatra:
MayPlace Hotel 3 *;
Ibis 3 *;
Orakai Insadong Suites 4 *;
Center Mark Hotel 4 *;
Aventree Hotel 4 *.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Palace Changdeokgung any Séoul?
Ny kianja sy ny lapam-panjakana dia ao afovoan-drenivohitra, ary ny fomba tsotra indrindra hahatongavana dia ny fitateram - bahoaka . Azonao atao ny mandray ny metro , laharana 1 na 5, taorian'ny nahatongavany tao amin'ny tranokala Changdeokgung Palace. Afaka eto koa ianao amin'ny alàlan'ny bus 162, izay hitondra anao mivantana mankany amin'ny fidirana ao amin'ny valan-javaboary.
Amin'ny fiara na taxi, ny dia avy any amin'ny renirano mankany Changdeokgun dia tsy mihoatra ny antsasak'adiny.
Nosy Artificial (Seoul)
Ny bikabikan-kiran'ny vehivavy
Mainty Face Masiaka
Ny fampifangaroana ny sary eo amin'ny efitrano fandriana
Jacket ao amin'ny style Chanel
Fitafy ankanjo akanjo
Nahoana no manonofinofy ny saka mainty?
Volokano amin'ny voninkazo amin'ny tanany manokana
Nahoana no nofinofy ny milanja ombivavy?
Sary nalaina tamin'ny fampisehoana ... Pekingese
Efitrano fianarana ho an'ny tovovavy
Derbennik ivolistny - fananana medikaly
Fomba hisafidianana milina fanasana sy hisorohana ny fahadisoana?
Otitis ny sofina afovoany - soritr'aretina sy fitsaboana, izay tena hanampy
Inona no tokony hatao raha fongana ny fimailo?
Tondra-drano vita amin'ny intra-ductulle amin'ny tratra - ahoana no hisorohana ny homamiadana?
Proteinina ho an'ny zazavavy
Airports of Madagascar
Hira felana amin'ny tananao
Cream for cake decoration